Xinhua Myanmar - အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် အပူပိုင်း ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း Seroja ကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၇၄ ဦးထိ ရောက်ရှိလာ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ Maumere တွင် ဆိုင်ကလုန်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးနောက် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များအား ဧပြီ ၆ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) Asia
“ မုန်တိုင်းဒဏ်အဆိုးရွားဆုံးခံစားရတဲ့နေရာတွေကတော့ အာလော် ၊ လမ်ဘာတာ နဲ့ အက်ဒိုနာရာ ဒေသတွေဖြစ်ကြပါတယ် ” ဟု အေဂျင်စီအကြီးအကဲ Doni Monardo က ဆိုသည်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုက ဒေသခံပြည်သူများ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဘေးဒဏ်သင့်နေရာများမှ ပြည်သူများကို ဘေးကင်းလုံခြုံသော နေရာများသို့ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အရှေ့နျူဆာတန်ဂါရာပြည်နယ်တွင် အပူပိုင်း ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ရေကြီးမှုများနှင့်မြေပြိုမှုများအတွင်း ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအား ဧပြီ ၄ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ မိုးလေဝသ၊ ရာသီဥတုနှင့် ဘူမိရူပဗေဒဆိုင်ရာအေဂျင်စီက အရှေ့နျူဆာတန်ဂါရာပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိ Savu ပင်လယ်ထဲတွင် ဧပြီ ၅ ရက်က အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အပူပိုင်း Seroja မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း ၊ လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း နှင့် ၆ မီတာ ခန့်ရှိသည့် ပင်လယ်ဒီလှိုင်းကြီးများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း စသည့် ဆိုးရွားသည့် ရာသီဥတု နောက်ဆက်တွဲ အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း ဆိုသည်။
Seroja မုန်တိုင်းသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် ၁၀ လုံးမြောက် အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီး ယင်းမုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် မြေပြိုမှုများ အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် အဆိုပါ Seroja မုန်တိုင်းသည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
JAKARTA, April 10 (Xinhua) -- The death toll of tropical cyclone Seroja in Indonesia's East Nusa Tenggara province has risen to 174, according to the National Disaster Management Agency on Saturday.
"The worst-hit areas are Alor, Lembata, and Adonara," the agency's head Doni Monardo said.Indonesian President Joko Widodo has decided to relocate the affected settlement areas to safer places, with the consent of the local community.
The Meteorology, Climatology and Geophysics Agency said such extreme weather as heavy rains, strong winds and high sea waves of up to6meters occurred after tropical cyclone Seroja swirled in the Savu Sea, south of East Nusa Tenggara province, withapeak on April 5.
Seroja is the 10th tropical cyclone hitting Indonesia since 2008 and had the worst impact as it made landfall. Currently, Seroja is moving away from Indonesia. EnditemPhoto(1,3) Photo provided by National Search and Rescue Agency (Basarnas) in Maumere on April 6, 2021, Flores Timur district, East Nusa Tenggara, Indonesia.
Photo (2,4) Photo taken on April 4, 2021 shows the damage of flash flood and landslide in East Nusa Tenggara, Indonesia.